Igurube na-efe efe: njirimara, mmeputakwa na mmebi | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime ụwa enwere ọtụtụ ụmụ ahụhụ nwere ike ịmụba na nnukwu ọsọ. Ọtụtụ n'ime ha nwere ikike nke nwere ahụ ike nwere ike imebi ihe ndị dị ndụ na nsogbu na nsogbu ụmụ mmadụ. Otu n'ime ha bụ ihe otiti igurube. Ọ bụ otu n'ime ihe egwu kachasị dị egwu na egwu ụwa. Na ọ bụ na ha nwere ike ikpuchi ihe ruru 100 kilomita kwa ụbọchị wee kpochapụ ihe ubi niile ha gafere.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a ịgwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara otiti igurube na njikwa ha.
2 Àgwà na usoro ndu nke igurube
3 Igurube nke igurube
4 Pests na Spain
Igurube nke igurube aghọwo ihe egwu nchekwa nri n'ọtụtụ mba ndịda. N’akụkọ ihe mere eme nile, ihe otiti nke igurube emewo ka nnukwu ụnwụ daa ma kpochapụ ha kpam kpam ka ọ ghara ịbụ eziokwu. N'ihi na ọsọ ha na-agagharị na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nọ n’ebe ahụ, ọ bụghị ikwu banyere ọsọ nke mmeputakwa, mee ka njikwa na njikwa ha sie ike.
O nweela mmetụta emetụta ọrụ ugbo ruo ọtụtụ puku afọ, enwere ike ịchịkwa ya nke ọma site na itinye usoro ụfọdụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na sayensị site na mmalite nke narị afọ XNUMX. Ọ bụ n'oge a ka ọ malitere iwelata mmebi nke ụdị ahụhụ a. Ọ ghọrọ otu n'ime pests kachasị emebi maka ọrụ ugbo. Ha nwere ike ịkwaga ebe dị anya ma bibie ebe ndị na-eto eto na-achọ nri.. Ha na-agba oke ọsọ site na puku kwuru puku kilomita ha jere na nnukwu okomoko.
Ndị nyocha si mahadum dị iche iche na-amụ banyere ọnọdụ nke ihe otiti igurube ugbu a na mpaghara dị iche iche nke ụwa. Ọ dị mkpa ịmata omume ha ka oge na-aga iji nwee ike ịkọwa mbugharị ha. E nwere ọtụtụ igurube dị iche iche, mana nke kacha emebi emebi bụ Gregarious schistocerca. Speciesdị a na-emetụta ihe karịrị mba 50, ụfọdụ n’ime ha ka na-aga n’ihu. Mba ndị ọzọ igurube na-efe efe bụ ndị na-enweghị ike ịnweta akụrụngwa iji nagide mmebi ahụ kpatara.
Àgwà na usoro ndu nke igurube
Lobsters bụ ụmụ ahụhụ nke usoro Orthoptera n'ime ezinụlọ Acrididae. Ndị ezinụlọ a gụnyere ihe kariri umu 5.000 amara nke ọtụtụ narị n’ime ha bụ ndị na-eweta mbibi ma ọ bụ naanị ihe ruru iri abụọ n’ime ha na-akpata mbibi dị egwu. Imirikiti ụdị ndị a niile bụ ndị na-akwagharị ma nwee ike ịga ebe dị anya na-eweta pests.
Ihe otiti nke igurube ndị ahụ abụghị ihe karịrị nanị ngosipụta buru ibu nke ụmụ ahụhụ ụfọdụ na-eme mgbe gburugburu ebe ha bi na-agbanwe site n'otu akụkụ nke otu onye gaa n'ọzọ nke imekọrịta ihe. Akụkụ naanị nke lobsters kwekọrọ na mpaghara ozuzu ha. Ha na-abụkarị n'oge mmiri ozuzo na mgbe a pụrụ inye nri. A malitere igurube igurube mgbe oge ọkọchị malitere, nri adịkwa ụkọ. Ọ bụ mgbe ahụ mgbe ahụhụ na-echegbu onwe ha ma malite ịgbanwe n'ụzọ anụ ahụ, na-agbanwe ogo ha, agba na ọdịdị ha wee malite ịkwaga na saịtị ndị ọzọ na-achọ nri.
Ọ bụ mgbe ahụ ka ha ghọrọ anụmanụ na-arụ ọrụ ma bido mebie mmebi ebe niile. Mfe nke ngagharị ha na-eme ka o sie ike ịchịkwa mwakpo nke usoro ihe ọkụkụ dị iche iche. Ọ bụghị ụmụ ahụhụ niile bụ otu, mana mgbe ha kụrụ akwa n'oge mgbụsị akwụkwọ, ha na-ehi ụra n'oge oyi niile ma na-apụta n'oge opupu ihe ubi. Mgbe oge dị site na ụbọchị 40 ruo 90, njikọta spam na akwa na-amalite. Ọ bụ mgbe ahụ ka ndị toro eto na-ata ata na usoro ndu ha na-amalite ọzọ.
Akwa àkwá nke ọ bụla na-atụgharị ghọọ lobsters 100 nwere ike. E mewo atụmatụ na n’oge ụfọdụ, ha pụrụ iru nde 30.000.
Igurube nke igurube
Anyị ekwuola na ọ bụ ọrịa nwere ike ikpuchi ihe dị ka kilomita iri atọ. Na Gregarious schistocerca Ọ bụ ahụhụ kachasị emerụ n'ụwa ma na-enye ọtụtụ ọgbọ kwa afọ. Ìgwè mmadụ pụrụ ịwakpo ebe ndị ahụ ekpuchi 30 nde square kilomita. Ka ọ dị ugbu a, ha na-emetụta Africa na mpaghara Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia niile. Ha nwekwara ike fega na Canary Islands ebe ha nọrọ ọtụtụ ụbọchị ruo mgbe ha lara.
Osisi nke ụdị lobster a ga-akwaga bụ ịchọta ebe kwesịrị ekwesị maka nhazi. Ọ bụrụ na ha achọtaghị ya, ha na-ebibi ihe niile ha hụrụ ma na-akwaga ebe ọzọ. Buru n'uche na lobsters dị na kọntinent niile na Ahụhụ pests pụta ọ bụla 3-4 afọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na inwere ọmụmụ na ihe edere nke ọma, a mara na ọ nweghị ọgwụ ahụhụ na-eme ugbu a ụzọ maka mbibi ya kpamkpam.
Ihe kachasị mkpa bụ ịmata mgbe igurube nwere ike igbanye. Ọ bụrụ na ebe ebe anụmanụ ndị a bidoro gbasaa na-amalite ịchịkwa, enwere ike iwe iwe ma gbochie ihe otiti ahụ. Dịka ọmụmaatụ, na Spain, a maara ụdị abụọ dị iche iche na-awakpo ubi ihe ubi ma ha na-apụta mgbe niile n'oge oge. Ọ bụ n'oge a ka ọgwụ ahụhụ na-akwado ọgwụ na-amalite iji maka njikwa ha.
Pests na Spain
E kwesịkwara ịkọwa ya na ụmụ ahụhụ na-ata ahụhụ na mba anyị abụghị nnukwu nsogbu. N'agbanyeghị nke a, ọrụ agronomic na Spain na-ahụ maka ịchịkwa pests nke ọma na ịmara ebe ụmụ ahụhụ a ga - esi pụta mgbe ha si n'otu oge gaa n'ọzọ mmekọrịta. Nke ahụ bụ ebe ọ dị mma igbu ha na isi iyi ha.
Ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta kwenyesiri ike na mgbanwe ihu igwe nwere ike ịgbanwe agwa ndụ na ịfefe ha na mpaghara ebe ha na-ebuteghị ajọ ihe. M pụtara, nke a ka nwere ike ịka njọ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe otiti igurube na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » A pụrụ ịchịkwa ihe otiti igurube?